सिंहदरबार – News Portal
September 7, 2019 epradeshLeaveaComment on सिंहदरबार
कुनै विद्यालयको कक्षा ४ मा पढ्ने विद्यार्थीहरुले नेपाली विषय पढाउने आफ्ना गुरुलाई एकदिन भन्छन् ‘गुरुजी, आज हामीलाई एउटा कथा सुनाईदिनुस् न ।’ गुरुले पनि उनीहरुको आग्रहलाई नकार्न सकेनन् । उनले भने ‘तिमीहरुलाई म कथा सुनाउँछु । तिमीहरु हल्ला नगरी शान्तसँग बस है ।’
एउटा सानो जङ्गलको ओडारमा स्यालका भाले पोथी बस्दथे । एकदिन पोथी स्यालले भालेलाई भनिछ, ए बुढा ! हिजो आजभन्दा पहिलेका दिन कति राम्रा हकि ? भालेले सोधेछ, ‘कसरी राम्रा भए अघिका दिन ?’
अघि गाउँमाा बस्ने मनुष्यहरुले कुनै म¥यो भने खोला सोतामा लिएर खाल्डो खनेर गाड्ने गर्दथे । अनि हामीजस्ता सिधासाधा चौपायाहरुको आहार बनाउन सजिलो हुन्थ्यो । हामी रमाई रमाई खान्थ्यौँ । बच्चाहरु धेरै खुशी हुन्थे । कति राम्रा दिन थिए ।
तर अब त गाउँलेहरुलाई पनि मरे भने नगाडेर नदीमा लगेर जलाई दिन्छन् । अनि हामीलाई फर्साद भएन । त्यसकारण हाम्रो लागि त पहिलेका दिन राम्रो हैन बुढा, भालेले भन्यो ‘कुरा ठीक गरिस् बूढी तर के गर्ने ?
हामी अनाथहरुको कुरा कस्ले सुन्ने? कस्ले मान्ने ?’ पोथी स्यालले भनी ‘अब के गरौँ त ? के खाएर ज्यान पालौँ ?’ भाले स्यालले भन्यो ‘हामी पनि अब समय अनुसार चल्नुप¥यो, जे पाइन्छ त्यही खाउँ, किन मनुष्यहरुको मुख हेर्ने ? यिनीहरुका भर नपरौँ ।’
केही पर गाई बाख्राहरुले घाँस खाईरहेको देखाउँदै उसले बूढीलाई भन्यो ‘हेर त ऊ पर ती चौपायाहरुले घाँस खाईरहेका छन्, हामी पनि घाँस खान सिकौँ कसो ?’
पोथी स्यालले भनी कुरा त ठिक ग¥यौँ । हामी पनि घाँस खाने बानी परौँ त । भालेले भन्यो ‘मेरी बूढी साह्रै असल छिन्, छिट्टै कुरा बुझिछन् ।’ पोथी स्यालले भनी ‘गाउँघरमा नै सिंहदरबार आएपछि गाडेको मान्छे कहाँ पाईन्छ त ? त्यसैले ज्यान बचाउन घाँस खानै प¥यो ।’
यसरी स्याल परिवारले रमाई रमाई घाँस खान थालेछन् ।
अनि एकदिन भाले स्यालले पोथीलाई भने छ ‘ए बूढी, एउटा कुरा नी, सिंहदरबार गाउँघरमा आएपछि मनुष्यले मात्र अधिकार र सुविधा पाउलान् त ? हामीलाई खै त सरकारले हेरेको ? बूढीले हाँस्दै भनी ‘त्यही त हाम्रो पनि सुनुवाई हुन्छ होला ।’
‘कसरी हुन्छ ?’ भालेले प्रश्न ग¥यो । पोथीले भनी ‘हामी पनि त यहि देशका बासिन्दा हौँ, हाम्रै हितका लागि पशुपंक्षी मन्त्रालय बनेको छ के ।’ भालेले भन्यो ‘कति कुरा बुझेकी रहिछ मेरी बूढीले अब त चित्त बुझ्यो ।’ हाम्रा पनि दिन आएछन् भन्दै चित्त बुझाएछन् ।
पुन परिवारलाई सोलार सहयोग
शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तत्पर
कैलालीका युवासंगै आउने दाङका सात युवा बेलझुण्डी अस्पतालमा